तिनाउ नदीमा एक बालकको श,व फे,ला समाचार – Dainik Sangalo
तिनाउ नदीमा एक बालकको श,व फे,ला समाचार
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०८, २०७८ समय: १६:२४:५५
बुटवल-बुटवलको तिनाउ नदीमा एक बालकको श,व फे,ला परेको छ। अ,र्ध,न,ग्न अवस्थामा फे,ला परेको श,व कसको हो भन्ने पहिचान भएको छैन।
अन्दाजी १२ वर्षका बालक मृ,त अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पौडी खेल्दै गर्दा नदीमा बगेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। स्थानीयले श,व देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका छन्।
जसलाई धेरै विश्वास गरिन्छ उसैबाट मायाको पनि अपेक्षा गरिन्छ ।दुईजना केही गरौंला भनेर विवाह गरिन्छ ।मायाको चिनो स्वरुप विवाहपछि सन्तान जन्माइन्छ ।तर खाएका सबै कसम भुलेर सुत्केरी श्रीमतीलाई एक्लै छोडी श्रीमान हिडे भने त्यस् बेलाको जस्तो निरास क्षण श्रीमतीको लागि अरु के होला र ।
काभ्रे घर भएका राधीका थापा र राजकुमार थापाले विवाह गरेको ४ वर्ष भयो ।राजकुमारले राधीकालाई र क्सी खाएर निकै कु, ट, पि, ट गर्ने गरेको र उनी गर्ववती भएको बेला हस्पिटलको बेडबाटै श्रीमानले आफुलाई छोडेर हिडेको उनले गुनासो गरिन्।
राधीकाको अनुसार बच्चा निकै बि रामी छ ।डाक्टरसंग बच्चा देखाउदा बच्चाको आन्द्रामा घा उ भएको र कानमा मासु पलाएको हुँदा कानको शल्यक्रिया गर्नु पर्ने बयाएको छ ।तर यस्तो अवस्थामा आफ्नो श्रीमानले छोडेर एक्लै पारिदिदा उनी अहिले निकै बेसहारा भएकी छिन् ।
काठमाडौं । काठमाडौंबाट पोखरा जाँदै गरेको कार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित नाग्दी खोला’बाट त्रिशूली नदीमा ख’स्दा तीन जना बे’पत्ता भए’का छन् ।
ग.२ च ४९१८ नम्बरको कार गएराति साढे १२ बजेतिर अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ३५ मिटर तल त्रिशूली नदीमा खस्दा चालक सहित तीनजना बे’पत्ता भ’एको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
बे’पत्ता हुनेमा कार चालक पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ का ५५ वर्षका प्रेम बहादुर भुजेल, सोही स्थानका ५५ वर्षका लेख बहादुर भुजेल र उनकी श्रीमती ३६ वर्षीया ईश्वरी भुजेल छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार घाइ’ते हुने’मा पोखरा महानगरपालिका–१७ बस्ने ४६ वर्षीय रुद्रलाल सुवेदी रहनुभएको छ ।
उहाँको भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज)मा उपचार भइरहेको छ । घाइतेको अवस्था मध्यम रहेको छ ।
कारमा सोही ठाउँ बस्ने अन्दाजी ६० वर्षीय प्रेमबहादुर भुजेल, सोही ठाउँका अन्दाजी ५५ वर्षका लेखराम भुजेल र उहाँकी श्रीमती ३६ वर्षीया ईश्वरी भुजेल सवार रहेको बताइउको छ ।
कारसहित उहाँहरु बेप’त्ता भए’को प्रहरीले जनाएको छ । बे’पत्ता भएकाको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ
लाका प्रहरी कार्यालय बुटवल डिएसपी मदन कुँवरले श,वको पहिचान हुन नसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्।
Last Updated on: September 24th, 2021 at 4:24 pm
२५३ पटक हेरिएको